Guddoomiyaha Baarlamaanka Oo Ka Qeybgalay Kulan Guddiga Madaxa Banaan Ee Dastuurka Loogu Wareejinayay Cutubyo ku Jira Dastuurka – Somnews
By somnews	 On Dec 1, 2015
Guddiga Baarlamaanka u qaabilsan la socodka Dastuurka KMG ah ee dalka ayaa maanta waxa ay cutubyo ka tirsan dastuurka ee dalka ay ku wareejiyeen guddiga madaxabanan ee dib u eegista dastuurka dalka si ay dib u eegis ugu Sameeyaan, halka guddiga madaxa banan ee dastuurka ay dhinacooda ay iyaguna ay Guddiga baarlamaanka u qaabilsan la socodka dastuurka y ku warejiyeen 3 cutub oo ay dib u eegis ku soo sameeyeen .
Sedexda cutub ee maanta lagu wareejiyey guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ayaa kala ah kan 6-aad oo ka hadlaya awooda baarlamaanka iyo wajibaadka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya,7-aad oo ka hadlaya awoodaha Madaxwaynaha uu siinayo dastuurku. iyo 8 aad oo qeexaya awoodaha iyo howlaha ay qaranka ugu xilsanatahya laanta fulinta ama xukuumadda.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan jawaari iyo wasiirka dastuurka dalka ayaa ka qayb galay kulankani ay labada gudi ay iskula wareejinayen cutubyada dastuurka ee qaarna dib dib u eegista lagu Soo sameeyey kuwa kalena ay guddiga madaxa banaan ay ku soo sameyn donaan dib uu eegid .
Wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo kulan ka hadlay ayaa sheegay in cutubyadan dastuurka ee ay gudiyaddu isku wareejiyeen ay qayb ka tahay dar-dar galinta dib u eegista dastuurka kKMG ee Soomaaliya.
Guddoomiyana Golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan jawaari oo kulankani ugu dambeyntii ka hadlay ayaa kula dar-daarmay dhinacyada ku howlan dib u eegista dastuurka in ay ku saleyaan sidii loo heli lahaa dastuur ay wada leeyihiin guud ahaan umadda Soomaaliyeed islamarkaana meesha ka saaraya dhamaan tabashooyinkii shacabka Soomaaliyeed soo kale dhex galay.
Dastuurka KMG ah ee Dalka oo ka kooban 15 cutub ayaa waxaa dib u eegis lagu sameeyey 5 cutub oo ka mid ah.